Kufezeke iphupho loSuthu ngeCaf - Ilanga News
Home Ezemidlalo Kufezeke iphupho loSuthu ngeCaf
Kufezeke iphupho loSuthu ngeCaf
UTHEMBELA Sikhakhane uqokwe njengomdlali ovelele AmaZulu FC eqopha umla-ndo ngokungena kwiCaf Champions League okokuqala ngqa emlandweni
wale kila-bhu. USuthu luhlule iSwallows FC ngo-1-0 koweligi okwenze kwaqinisekiswa ukuthi luzoqeda isizini endaweni
yesibili kwi-log. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
UMLANDO AmaZulu FC engena okokuqala kwiCaf Champions Lea-gue ngemuva kokuhlula iSwallows FC ngo-1-0 emdlalweni weDStv Pre-miership izolo ngoLwesithathu kusihlwa eKings Park Stadium, eThekwini.
Igoli elifake uSuthu kwiChampions League livalelwe nguTapelo Xoki ngomzuzu ka-12 kuyiphenathi.
Ukunqoba koSuthu lo mdlalo ku-feze isifiso sabaphathi abasha abafu-nga bagomela ukuthi bafuna iqede isendaweni yesine.
UBenni McCarthy ocija le kilabhu yena ufike wathi ufuna okungaphezulu kwalokhu okufunwa ngabanikazi bekilabhu.
USandile Zungu onguMengameli woSuthu usanda kutshela ILANGA ukuthi ufisa ukuyibona igijima kwiCaf Champions League. Lokhu sekusheshe kwafezeka njengoba le kilabhu ingekho esazoyiphazamisa endaweni yesibili. USuthu luzosonga isizini ngokuvakashela iMaritzburg United ngoMgqibelo ngo-15h00 eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu.
USuthu luzodlala kulo mqhudelwano neMamelodi Sundowns esivele iyizingqwele ze-Premiership. IDowns ihlule iBloemfontein Celtic ngo-2-0 izolo, eBloemfontein.
Ikilabhu eyizingqwele neqede endaweni yesibili amela iNingizimu Afrika kwiCaf Champions League, kanti eqede endaweni yesithathu yona idlala kwiCaf Confederations Cup.
IBlack Leopards igubuzelwe wusizi njengoba ishoveleke kwiGladAfrica Championship ihlulwa yiCape Town City ngo-3-1 kowe-Premiership eCape Town Stadium.
U-Arthur Zwane usivule kahle isihlalo sokuqeqesha iKaizer Chiefs ihlula iLamontville Golden Arrows ngo-3-2 eFNB Stadium, eGauteng.
ITshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) nayo izomela elakuleli kwiConfederations Cup ngemuva kokuba yizingqwele zeNedbank Cup ihlula iChippa United kowamanqamu.
USuthu kalukaze luyidlale imidlalo yase-Afrika selokhu kwasungulwa iPremier Soccer League (PSL) ngo-1996. Luke kwacishe lwangena kwiConfederations Cup kodwa lwaphazanyiswa wukuhlulwa yiBidvest Wits kowamanqamu weNedbank Cup ngo-2010.
I-Orlando Pirates igudluze i-Arrows endaweni yesithathu ihlula iBaroka FC ngo-2-1 ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane. Ukuhlulwa kwe-Arrows kuyenze yaqhelela iBucs endaweni yesithathu. Nokho i-Arrows isengabuyela endaweni yesithathu yinqobo nje uma izonqoba umdlalo wokugcina bese ithandazela ukuthi iBucs yehlulwe.
IChippa United ingase iyodlala imidlalo yokuhlunga ngemuva koku-dlala ngokulingana kuba ngo-0-0 neTTM izolo ePolokwane.
* Isiyonke imiphumela yeDStv Premiership ebiyizolo ngoLwesi-thathu ihambe kanje:- Chiefs 3, Arrows 2, TTM 0, Chippa 0; AmaZulu 1, Swallows 0; Celtic 0, Sundowns 2; CPT City 3, Leopards 1; Baroka 1, Pirates 2.
Previous articleAbomfundaze bayazihlangula ekufeni komfundi
Next articleKusolwa umona uthisha eshiselwa imoto